01/04/2016 : Journal : How to use Digital Solution for Water Festival
Home > News April 2016 > 01/04/2016 : Journal : How to use Digital Solution for Water Festival
Facebook Ads များဖြင့် သင်္ကြန်ကာလာ အတွင်းကြော်ငြာများပြုလုပ်ပြီး ရလဒ်ကောင်းများ ရရှိအောင်ပြုလုပ်လိုက်ပါ။
ဆိုင်ပိုင်ရှင်များ အတွက် သင်္ကြန်ကာလ အတွင်း သုံးစွဲသူများ လိုအပ်သည့် ပစ္စည်များ ကို ကြိုတင်လေ့လာထားရပါမည်။ ထိုအချက်သည် သင့်အတွက် ရောင်းအား ပိုမို တက်လာစေရန် အထောက်အကူပြုနိုင်ပါသည်။
ဥပမာ အနေဖြင့် သင့်မှာ Website (သို့မဟုတ်) Facebook Page ရှိပါက သင်္ကြန်ကာလ နှင့် ပတ်သက်သည့် ပစ္စည်းများကို ပြသ ထားရပါမည်။ ဒါမှ သင့် Website (သို့မဟုတ်) Facebook Page ကို သုံးစွဲသူများ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု နှုန်းများ လာပြီး ရောင်းအားလည်း သိသိသာသာ တက်လာနိုင်ပါမည်။ နေကာမျက်မှန်များ၊ ကမ်းခြေ ဝတ်စုံများ . အစရှိသည့် သင်္ကြန်ကာလာ နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်များကို သင့် Website (သို့မဟုတ်) Facebook page တွင် ပထမ ဦးဆုံး စာမျက်နှာ၊ Suggest Menu များဖြင့် ဖော်ပြထားပါက သုံးစွဲသူများ အနေဖြင့် လွယ်ကူစွာ ရှာဖွေနိုင်ပါမည်။
နောက်တစ်ဆင့်အနေဖြင့် သင့် Website (သို့မဟုတ်) Facebook Page များကို သုံးစွဲသူများ ထံ လွယ်ကူစွာရောက်ရှိစေရန် အတွက် Search Engine များကို အသုံးပြုပြီး Promote လုပ်လိုက်ပါ။ ထိုအချိန် တွင် သုံးစွဲသူများ သည်လည်း သူတို့အတွက် လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများကို အဓိက ထားပြီး ရှာဖွေချိန် လည်းဖြစ်နေသည့်အတွက် သင့် Promote လုပ်ထားသည့် Page ကို လွယ်ကူစွာတွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
March လ ၂၄ရက်နေ့ တွင် ဖြန့်ဝေသည့် Bangkok Business Newspaper ၏ " New Media " column တွင် ReadyPlanet Co.,Ltd မှ COO ဖြစ်သူ Mr. Burin Kledmanee မှ အကြံပေးချက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
သင်္ကြန်ကာလအတွင်း Facebook သုံးစွဲသူများ ၏ အရေအတွက် နှင့် Google တွင် Water Festival, Water festival dress. အစရှိသည့် Keyword များ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်သည်လည်း ပုံမှန် ထက် ၅ ဆ လောက် သိသိသာသာ များပြားလာသည် ကို တွေ့ရပါသည်။ ထိုအချက်သည် လုပ်ငန်းရှင်များ နှင့် ဆိုင်ပိုင်ရှင်များ အတွက် Promote ပြုလုပ်ရန် အချိန်ကောင်းပဲ ဖြစ်ပါသည်။
ဒါကြောင့် Facebook Ads ဖြင့် ဈေးကွက် တည်ဆောက်သူများသည် ထိုအချိန်တွင် သုံးစွဲသူများ ၏ Newsfeed ပေါ်သို့ လျှင်မြန်စွာ ရောက်ရှိနိုင်ပြီး သုံးစွဲသူများ ၏ စိတ်ဝင်စားမှုကို ပိုမို ရရှိနိုင်ပါသည်။
Facebook Ads လုပ်ငန်းအတွက် ၁လ packageကို ၅.၄.၂၀၁၆ အထိ ၇၅၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် ယနေ့မှစ၍ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။